Frank Chikowero and Samuel Takawira In Court
Kutongwa kwevatori venhau, Frank Chikwore anoshanda akazvimirira na Samuel Takawira wekambani ye263 Chat, kwatanga neChina kudare ramajisitiri kuMbare, vaviri ava vachiramba mhosva yavari kupomerwa.
Chikowore naTakawira vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzvirira kuparira kwechirwere cheCovid-19 National Lockdown Regulations.
Muchuchusi panyaya iyi, VaLawrence Gangarahwe, vati Chikowore naTakawira vakapinda muchipatara cheParktown muHarare musi wa22 Chivabvu zvisina mumvumo vachida kutaura nenhengo nhatu dzeMDC, Muzvare Joana Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova, avo vainge vapambwa nevanhu vasati vave kuzivikanwa pari zvino.
Zvinonzi vari muchipatara imomo, Chikowore naTakawira havana kutevedzera mutemo weSocial Distancing izvo zvakaizoita kuti vakuru vakuru vepachipatara ichi vadane mapurisa izvo zvakozoita kuti vaviri ava vasungwe.
Asi Chikowore, uyo ari kumuririrwa negweta, VaPaidamoyo Saurombe neZImbabwe Lawyers for Human Rights pamwe naTakawira, uyo ari kumirirwa naVaTonderai Bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungwa vaiita basa ravo.
Chikowore audza mutongi wedare kuti akasvika pachitapara ichi akaita zvinodiwa kudzvirira chirwere ichi uye aramba kuti akatdza kutevedzera mutemo weSocial Disancing.
Takawira ari kurambawo mhosva iyi achiti akapinda pachipatara ichi mushure mekupihwa mvumo nemagweta enhengo dzeMDC uye akatozoshamisika ave kusungwa kunyange hazvo ainge aratidza mapurisa magwaro ake ebasa.
Achibvunzurudzwa nemagweta aChikowore naTakawira, mutikitivha ari kuita nyaya iyi, VaCollin Makore, vaudza dare kuti havana kuona vaviri ava vachipara mhosva asi kuti vakanzwa nevakuru vakuru vepachipatara ichi.
Vatiwo vanoziva kuti maWard epaParktown Hospital madiki uye munobvumirwa mushanyi mumwe chete nekudaro pakapinda Chikwore naTakawira vanhu vakange vatowandisa muWard yaive nevarwere ava.
VaMakore vabvumawo kudare kuti vaviri ava havana kumupikisa pavakavaudza kuti vabude muchipatara uyewo vati havasi ivo vakasunga asi kuti mushure mekuvaburitsa muchipatara vakavatambidza kumapaurisa ekuWaterFalls ayo akazovasunga.
VaSaurombe vati nyaya iyi ichaenderera mberi nemusi weChina chinouya.
Mune imwewo nyaya, kumatare ekuMbare kwekare, vatori venhau Panashe Makufa naPritchard Hove, vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinonzi nemapuria hazvibvumidzwe kana kuti disorderly conduct.
Vaviri ava vazoburitswa mushure mekupindira kwemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Makufa audza Studio 7 kuti asungwa nemumwe wake uye ange achiita basa rake rekutora mifananidzo.
Kusungwa nekushungurudzwa kwevatori venhau kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange yazvo svondo rapfuura mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakaisana mutemo weFreedom of Information Act uyo unofanira kurerutsa mashandiro evatori venhau pamwe nekuti vaite basa ravo vasingambunyikidzwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozhohza yavo.